About UBIS | ILU Myanmar
About UBISBBA DegreeMBA DegreePhD DegreeShort CoursesNPT CampusInstalment PricingApplyContactFacebook
လုပ်ငန်းခွင်ဝင်နေကြသူတွေကို ကိုယ့်နိုင်ငံအတွင်းမှာပဲ အရည်အသွေးမီပညာရေးနဲ့ ပံ့ပိုးပေးချင်တဲ့စိတ်ဆန္ဒအရ ဒီကျောင်းကိုဖွင့်လှစ်တာပါ။ အရှိန်အဟုန်နဲ့တိုးတက်နေတဲ့နိုင်ငံ့စီးပွားရေးမှာ ကိုယ့်အတွက်နေရာတစ်နေရာရအောင် ကြိုးပမ်းအားထုတ်ချင်နေကြတဲ့ အလုပ်ခွင်ထဲကသူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့အရည်အချင်းတွေဖြည့်နိုင်ဖို့ရာ ကျောင်းအနေနဲ့ အစစအရာရာစီစဉ်ပေးထားတာပါ။
ကျောင်းမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမတွေဟာ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုတက္ကသိုလ်တွေကနေ ဘွဲ့လွန်ဒီဂရီတွေရခဲ့တဲ့ အရည်အချင်းမီဆရာဆရာမတွေပါ၊ လုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာမှာ ကမ္ဘာအနှံ့ကအတွေ့အကြုံတွေနဲ့ပြည့်ဝနေတဲ့ ဆရာဆရာမတွေက ဦးဆောင်သွားမှာပါ။ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုသင်ရိုးညွှန်းတမ်းတွေကို မပြတ်တမ်းပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးမှ လေ့လာသင်ယူစေတာဖြစ်တဲ့အတွက် ခေတ်အမီဆုံးပညာရေးကိုရရှိစေမှာ အသေအချာပါ။
ဘွဲ့ပေးအပ်မယ့်မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ University of Business and International Studies (UBIS)ဟာ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုပါ။ ဒီတက္ကသိုလ်ဟာ အရည်အချင်းမီပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ဥရောပသမဂ္ဂရဲ့ အမြင့်ဆုံးအသိအမှတ်ပြုတာကိုခံရတဲ့တက္ကသိုလ်ပါ။ ဒါ့အပြင် လုပ်ငန်းခွင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် အမေရိကန်နိုင်ငံ IACBE ထံကနေလည်း အမြင့်ဆုံးအသိအမှတ်ပြုခံရတဲ့တက္ကသိုလ်ပါ။ (IACBE ဟာ အဆင့်မြင့်ပညာရေးကောင်စီ(CHEA)ကလက်ခံတဲ့ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ရေးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်နေတာဟာ စိတ်ချရတဲ့အချက်ပါ။) UBIS ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ ISO 29990 လက်မှတ်ရ ကျောင်းအနည်းစုထဲမှာ တစ်ကျောင်းအပါအဝင်ပါ။ CEO Magazine မှာ ILA ရဲ့မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တဲ့ UBIS ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်အတွက် ထိပ်တန်းစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြထားတာပါ။
ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့စွန့်စားခန်းအတွက် အသင့်ဖြစ်ပြီလား၊ အမှန်တကယ်အောင်မြင်ဖို့အတွက် အချိန်ကျပြီမဟုတ်လား။ ဒါဆို ဒီကနေ့ပဲ ILA မှာ စာရင်းသွင်းလိုက်ပါ။ 09-964 057 773.
မန်မာဘာသာဖြင့်ရေးသားထားသော ILA လမ်းညွှန်စာအုပ်ကို လွတ်လပ်စွာ ကူးယူနိုင်ပါတယ် … click here!
International Leadership University © 2015-2019